Ikhaya elihle e-Gornji Vinjani elinechibi lokubhukuda langaphandle, i-WiFi namakamelo okulala ama-4
Gornji Vinjani, Splitsko-dalmatinska županija, i-Croatia
Leli khaya lamaholide elinefenisha enhle nelihlomele kahle lisendaweni ethule nenhle enkabeni yeDalmatia.
Indlu isendaweni evulekile, ebiyelwe, imizuzu embalwa nje uma ushayela usuka edolobheni lase-Imotski futhi ilungele iholide lasehlobo nomndeni wonke. Kunegumbi lemisebenzi esitezi esiphansi sendlu, ngakho-ke kuqinisekisiwe ukuthi ngeke uthole isithukuthezi eholidini.
Ngaphambi kwendlu kukhona ichibi elikhulu elikumema ukuthi ubhukude uphumule. Inkundla yokudlala yezingane kanye nethala elimboziwe elinezoso kanjalo nendlu yokugezela eyengeziwe enomnyango ongaphandle nakho kungatholakala lapha.
Amabhishi amatshe amahle aseMakarska, Brela naseBaška Voda aqhele ngemoto nje isigamu sehora.
Sicela uqaphele ukuthi: Ilineni lombhede namathawula afakiwe esilinganisweni segumbi. Izindleko zokusetshenziswa zifakiwe esilinganisweni segumbi. Ichibi langasese langaphandle esizeni livulwa ngoJuni - ukuphela kukaSepthemba.
Lo mbungazi unokushiwo abanye okungu-37 kwezinye izindawo zokuhlala. Veza okunye okushiwo abanye